Ekpere a na -ekpegara Saint Anthony ka ịchọta ezi ịhụnanya [+ siri ike]?
Kpee ekpere nye San Antonio iji chọta ịhụnanya, nchọta maka ezi ịhụnanya bụ ihe na - eme ọtụtụ ndị ọrụ na nchegbu. Nke a kpatara na otutu oge ha ji choro ime ihe a ekpegara San Antonio ekpere ima, iji nyere ha aka ịchọpụta ya.
Mata mmadụ gụnyere inwe ike ịmalite ezin’ụlọ nke ha, maka nke a, ha na achọọ onye ha ga-esonyere ha na usoro a.
Ezi ihunanya abụrụla nke a na-azụmaahịa, buru oke ibu nke na ọtụtụ oge anyị na-eche ezigbo usoro nke ha rere anyị na fim, akwụkwọ na ọha n'ozuzu
Nke mbụ anyị ga-ahapụ ụzọ iche echiche ahụ, ihunanya nwere ike iju anyị anya otu anyị si eche, yabụ, anyị ga-adị njikere ma jiri obi ghere oghe ịnata ya mgbe o kpebiri ịbịarute.
Kpee ekpere Findchọta ezi ịhụnanya ga - enyere anyị aka ichere ma ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa ma mara otu esi amata ya.
1 Ekpere Saint Anthony iji chọta ịhụnanya O siri ike?
1.1 Kpee ekpere ka ị chọta ezi ịhụnanya
1.2 Ekpere Holy Anthony nke Padua iji chọta ịhụnanya
1.3 Kpee ekpere nye San Antonio iji chọta ịhụnanya nke ndụ gị
2 Enwere m ike ịrịọ San Antonio ekpere 3 ahụ?
Ekpere Saint Anthony iji chọta ịhụnanya O siri ike?
O siri ike ma sie ike, ọkachasị ma ọ bụrụ n’iji okwukwe na esite n’obi mee ya. Okwu Onyenwe anyị na-akuziri anyị, n'otu n'ime akụkọ ya na-enweghị atụ banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, na ịhụnanya nwere ike ịme ihe niile, na-atụ anya ihe niile, tachie obi na ọ gaghị akwụsị.
N'ụzọ dị otu a, anyị ga - eji etu anyị mara ma ọ bụ ịhụnanya ma ọ bụ ihe ọzọ a na - eche. Ọtụtụ na-ekwu na ha hụrụ n'anya na oge akwụsị ime otú ahụ, nke a, dị ka okwu Chineke si kwuo, abụghị obi ike.
Obi dị aghụghọ karịa ihe niile. Mmetụta na-agbanwe mgbe ịhụnanya bụ mkpebi.
Ikpegara Chineke onye okike ekpere ma rịọ ya ka o duzie anyi iji kpebie onye kwesiri ka anyi hụ ya n’anya na onye na-ekwesịghị, yana ịmata onye kpebiri ịhụ anyị n’anya n’ezie dị mkpa ebe ọ bụ na anyị na-ezere ọnọdụ ndị nwere ike iwute anyị.
Cheta na odighi Ekpere nke emere na okwukwe nke anaghi azaa.
O nwere ike iwe obere oge ma ọ bụ azịza ya si ebe anyị na-echechaghị, mana anyị ga-enwerịrị obi ike ịmata na Chineke na-eme ihe niile maka ọdịmma anyị, marakwa ihe bụ mkpa anyị.
Kpee ekpere ka ị chọta ezi ịhụnanya
Chinekem, Gi Onye, dika Onye Okike, n’enye ihe nile ekere eke ndu. Gị onye na-ahụ ihe niile ma mara ihe niile, akwụsịkwala ilegide anya na ndụ m ma hụ etu m ga-esi bulie onwe ya elu ma bụrụ onye ahụ nwere ike inwe ezi ịhụnanya.
Ọ bụrụ na omume m anaghị akachasị mma, ọ bụrụ na etu m si ebi ndụ na ndụ m abughi nke ịhụnanya, kọọrọ m. Biko gwa m n’ime obi m ihe niile m ma gbasara okwu gị. Biarue ntị m ntị ma tụọ ihe m kwesịrị ịme. Ahapụna m, ụbọchị niile, na-eche ụdị ịhụnanya ahụ, n'amaghị na ọ bụ m ga-agbanwe.
Chineke nke elu igwe, onye kacha ebube ma dikwa ebube, atukwasiri m obi na Gi. Ama m na okwu gị n’obi m dị ka mmiri dị ọcha nke na-agabiga n’osimiri ma na-asachapụ ihe niile n’ụzọ ya. Echerewo m okwu gị na ndụmọdụ gị. A na m atụ anya mburu gị. Achọrọ m ịnabata gị na nke m. Ama m na ha ga-abụ ihe ziri ezi, amamihe ma bụrụ eziokwu, ga-adaba adaba maka ndụ ịhụnanya m.
N'ihi na ị bụ Ikpe Ziri Ezi, amamihe na eziokwu. Chineke nke igwe, anam ekwe gị nkwa na aga m etinye ndụmọdụ ọkachamara gị na na m ga-agbaso ụzọ ahụ ị na-aka akara m. Duzie m n’ụzọ a ka m mara ụzọ m ga-eso, mgbe niile dịka iwu ịhụnanya gị si dị. Ekpere m bụ na onye ga-eme n’ọdịnihu ga-asọpụrụ m oge niile ma hụ m n’anya na-enweghị ọnọdụ ma họrọ m karịa ndị ọzọ.
Ekpere a kwesiri ikpepusi ihe anyi choro, anyi kwesiri iche echiche banyere ihe di nkpa karie mmetu obi, ihe gha agha rue otutu oge.
Enwere ike ihu n'anya n’ebe obula mana ihunanya na-ewulite kwa ubochi. Ọ bụ ọrụ otu anyị nwere ike ịdabere na enyemaka nke Onye Okike Chineke nke ihe niile.
Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume inweta ezi ịhụnanya ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị ike nke ekpere, ohere ga - adị nke ukwuu. Kpee iji okwu nke aka anyi wee chere azịza ya.
Ekpere Holy Anthony nke Padua iji chọta ịhụnanya
Saint Anthony gọziri agọzi, ụdị ndị nsọ niile, ịhụnanya gị maka Chineke na ịhụnanya gị maka ihe ndị o kere eke mere ka ị ruo eru inweta ike ọrụ ebube.
Site n'okwu gị ị nyere ndị nwere nsogbu ma ọ bụ nchegbu aka ma ọ bụ ọrụ ebube sitere na ịrịọ arịrịọ gị. A na m arịọ gị ka ị nata m ... (kwupụta arịrịọ gị).
Ezigbo onye mm hụrụ n'anya, ya na obi gị juputara na obi ọmịiko mmadụ, na-arịọ arịrịọ m nye Nwa dị ụtọ Jizọs, onye masịrị ịnọ na ogwe aka gị, ma nweta ekele nke obi m ruo mgbe ebighi ebi. (Kpee nne na nna anyi ato na ndi Hail Marys).
Saint Anthony nke Padua bụ onye nsọ nke anyị ga-ekpegara ekpere maka ịchọta ezi ịhụnanya. O nwere ike inyere gị aka inweta ịhụnanya, onye gị na ya na-emekọ ihe, ọkara nke ọzọ, izu oke nke ndụ gị.
Ọ bụ onye ọzọ e mepụtara maka gị, enwela obi abụọ na ọ dị.
Ekpere bu ike ma nyere anyi aka iduzi ike nke oma ka anyi ghara ịda njo ma obu njehie nke ikwere n’ebe anyi na-enweghi.
Kpee ekpere nye San Antonio iji chọta ịhụnanya nke ndụ gị
Saint Anthony, onye ebube ma mara maka ọrụ ebube gị, nye m Ebere nke Chineke ka m mezuo ọchịchọ m (inwe onye mmekọ).
Ebe ọ bụ na ị nwere obi ebere n’ebe ndị mmehie dịka m, elela mmejọ m anya, tugharia ebube nke Chineke ka ịgbaghara mmejọ m, nye m arịrịọ m n’ekpe gị maka gị. Ekele Saint Anthony nke Ọrụ Ebube, ngụgụ nke ndị e wedara n’ala, a na m arịọ maka enyemaka gị n’ikpere gị wee bụrụ Onye Ndu m. Eji m arịrịọ nyere gị aka ma nke a mee ka obi jọrọ m njọ ma nwee ekele.
Nabata onyinye m nke ịhụnanya na ịhụnanya n’ebe ị nọ. A na m e doghaghachi nkwa m ibi ndụ site n’ịhụ gị n’anya, Saint Anthony, Chukwu na onye agbata obi m.
Gọzie m n’arịrịọ m, nye m amara ka m banye n’Alaeze nke otu ụbọchị, ka m nwee ike ịbụ abụ ebere nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighi ebi.
Sn Antonio ga-ege gị ntị ma nyere gị aka n'oge usoro ahụ ka ị chọta ịhụnanya nke ndụ gị.
Ozugbo ịchọtara ya, ị nwere ike ịga n'ihu na-arịọ ya ka ọ gaa n’ihu iduzi nzọụkwụ ya na mkpebi ya oge niile.
Ekpere nwere ike, nwee okwukwe ma nwee ntụkwasị obi na ọ ga-eme nke fọdụrụ.
Enwere m ike ịrịọ San Antonio ekpere 3 ahụ?
You chọrọ ikpe ekpere karịa ekpere iji chọta ezi ịhụnanya?
Nwere ike ma kwesiri ikpe ekpere niile n’enweghi oke. Enwere ike ikpe ha niile ekpere n’enweghị nsogbu.
Cheta na ihe kacha mkpa bu inwe otutu okwukwe na Chineke na San Antonio.
N'ụzọ dị otu a, ị ga - enweta enyemaka kachasị ike iji nweta ịhụnanya.